स्थायी प्रक्रिया अघि बढाएपछि प्रत्यारोपण केन्द्रका नर्स आन्दोलित – Nepali Health
स्थायी प्रक्रिया अघि बढाएपछि प्रत्यारोपण केन्द्रका नर्स आन्दोलित
२०७६ वैशाख १२ गते ११:४७ मा प्रकाशित
भक्तपुर, १२ बैशाख । शहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रका नर्सहरु सेवा बहिस्कार गरि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिदा अस्पतालको उपचार सेवा प्रभावित भएको छ ।
अस्पतालले खुल्ला प्रतिस्पर्धामार्फत कर्मचारी स्थायी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि नर्सहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । उनीहरुले सकेसम्म स्वत स्थायी नभए आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउन माग गरेका छन् ।
‘सरकारी अस्पताल भए पनि लगभग सबै कर्मचारी अस्थायी छन् । किनभने स्थायी दरबन्दी नै छैन । लामो समयको तयारी पछि यसपटक मन्त्रालयले दरबन्दी स्वीकृत गरि स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवालाई आग्रह गर्ने कार्य भइसकेको छ । अव एक दुई दिनमा विज्ञापन खुल्छ सायद । यो कुरा थाह हुँदा हुँदै आन्दोलनमा उत्रिनुको मनसाय के होला ?’ अस्पतालका निर्देशक डा पुकारचन्द्र श्रेष्ठले बताए ।
उनले आफ्ना कर्मचारीको सुविधाका लागि अस्पतालले गर्नसक्ने सबै सहयोग गरिरहेको बखतमा बिरामीको उपचार नै प्रभावित हुने गरी आन्दोलन गर्नु दुखद रहेको बताए ।
आन्दोलनको नर्स त्रजिना जतिले पुराना कर्मचारीको ग्रेडिङ, स्थायी लगायतका छ बुँदे माग राखि आन्दोलनमा उत्रिएको भन्दै पुरा नहुँदासम्म सेवामा नर्फकने बताइन । ‘लोकसेवाको लोभ देखाइएको छ । त्यो पनि खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्ने रे । हाम्रो माग आन्तरिक रुपमा प्रतिस्पर्धा गराउँ भन्ने हो । त्यसबाहेक अरु धेरै माग छन्,’ उनले भनिन् ।
करीब छ बर्ष अघि स्थापित केन्द्रले प्रत्यारोपणको क्षेत्रमा बेग्लै पहिचान बनाएको छ । तर पछिल्लो समय विभिन्न मागका नाममा हुने कर्मचारीको आन्दोलनले केन्द्रको सेवालाई खल्वल्याउन खोजेको प्रष्ठ देखिन्छ ।
‘अहिले दैनिक दैनिक एक सय भन्दा बढीको मिर्गौला डायलासिस हुन्छ । हप्ताको ७ वटा जस्तो मिर्र्गौैला प्रत्यारोपण हुन्छ । विरामीको लाइन त कति कति ? तर कहिले के कहिले के गरेर अस्पतालको सेवा प्रभावित बनाउने कोशिश गरिएको छ,’ एक कर्मचारीले बताए ।
बंशाणुगत रोग परीक्षण गर्ने अत्याधुनिक ल्याव अब नेपालमै
नेकपाको स्वास्थ्य विभाग प्रमुखमा राजेन्द्र पाण्डे
नेपाल नर्सिङ काउन्सिलको बोर्ड सदस्य पदमा ८ जना नर्सहरुको उम्मेद्धारी
गाँउ गाँउमा पुगेर गर्भवतीको भिडियो एक्स–रे
जुम्ला : ग्रामीण भेगमा पाठेघर समस्या
स्वास्थ्यको ६८ अर्ब बजेट यसरी भयो बाँडफाँड ? कहाँ कति ?
निजामति कितावखानाले स्वास्थ्य सचिव डा. चौधरीको नाम अवकाश पाउने सूचीबाट हटायो
स्वास्थ्यका कर्मचारीको नयाँ तलव : सचिवको ६४ हजार ७२६ रुपैयाँ, अरुको कति ?